သာရဏီယ ဩဝါဒကထာ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Copy/Paste » သာရဏီယ ဩဝါဒကထာ
Posted by may july on Jun 15, 2012 in Copy/Paste |7comments
ဗန်းမော်ဆရာတော်ဘုရားကြီး၏ သာရဏီယ ဩဝါဒကထာ …
(၂၀၁၂ ခုနှစ် ၊ ဇွန်လ ၁၂ ရက် ၊ အင်္ဂါနေ့ )
ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်အတွင်း မှီတင်းနေထိုင်ကြသော ဟန်ရှင်လူပြည်သူပြည်သားအပေါင်းတို့ —
ယနေ့အချိန်အခါသည်ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်အတွင်းမှီတင်းနေထိုင်ကြကုန်သော ရဟန်ရှင်လူ ပြည်သူအပေါင်းတိုကအနေဖြင့် မိမိတို့ မျှော်မှန်းခဲ့ကြသည့် နိုင်ငံရေး၊စီးပွားရေး၊ လူမှုရေးစတဲ့လောကီအရေးအရာ ကိစ္စများတွင် အခြေအနေကောင်းများသို့ ဖန်တီးနေချိန်၊ နိုင်ငံတော်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတတ်လာသည်နှင့်အမျှ မိမိတို့ သက်ဝင်ယုံကြည်ရာဘာသာအသီးသီး တိုးတတ်ထွန်းကားပြန့်ပွားအောင် ဆောင်ရွက်နိုင်မည့်အရေး မျှော်မှန်းလျှက် တတ်ကြွရွှင်လန်းဝမ်းမြောက်နေကြသည့်အချိန်ကာလဖြစ်ပေသည်။
ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်တွင်လူဦးရေ သန်း-၆ဝ ကျော်ခန့်ရှိရာ လူဦးရေ၏ ၈၉.၃၈ ရာခိုင်နှုန်းသည် ဗုဒ္ဓဘာသာကို သက်ဝင်ယုံကြည်ကြပြီး ကျန်ခရစ်ယာန်ဘာသာ၊ အစ္စလာမ်ဘာသာ၊ ဟိန္ဒူဘာသာနှင့် နတ်ကိုးကွယ်သူနှင့်အခြားဟူပြီး ဘာသာတရားမျိုးစုံ၊ အယူဝါဒမျိုးစုံရှိရာတွင် မြန်မာနိုင်ငံအတွင်း လူမျိုးမရွေး လူများစု လူနည်းစုခွဲခြားခြင်းမရှိ၊ မိမိတို့ ယုံကြည်ရာ ဘာသာကို လွတ်လပ်စွာ ကိုးကွယ်ခွင့်ရှိကြပေသည်။ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်များအတွက်သုတ္တန်၊ဝိနည်း၊ အဘိဓမ္မာတရားများရှိသကဲ့သို့ ခရစ်ယာန်၊အစ္စလာမ်၊ ဟိန္ဒူဘာသာ များတွင်လည်းသက်ဆိုင်ရာကျမ်းဂန်များအခိုင်အမာရှိကြပေသည်။ ထိုကျမ်းဂန်များသည် မိမိတို့ကိုးကွယ်ရာ ဘုရားရှင်အသီးသီး၏အဆုံး အမအဖြစ်အခံယူကြလျက်လူသားတို့၏ယဉ်ကျေးမှုကို ရင့်ကျက်စေသော ပစ္စုပ္ပန်တမလွန် နှစ်တန်ကောင်းကျိုးကိုအသီးသီးဆောင်ရွက်နိုင် ကြပေသည်။ မတူကွဲပြားသော ဘာသာရေးယုံကြည်သူများဖြစ်သော်လည်း လူမှုရေးဈ လူ့ယဉ်ကျေးမှုကိစ္စရပ်များတွင် တစ်ဦး၏အယူအဆ ကို တစ်ဦးကလေးစားခြင်း၊ အနှောင့်အယှက်မပြုပဲမေတ္တာကရုဏာမုဒိတာ ဥပေက္ခာပွားများခြင်း၊လက်တွဲဆောင်ရွက်ကြခြင်းဖြင့် လွတ်လပ် စွာကိုးကွယ်ယုံကြည့်ခွင့်၏ အနှစ်သာရကို ဖြစ်ပေါ်စေပါသည်။
ဟိမဝန္တာတောင်မင်းကြီးကို ပတ်ဝိုက်သွယ်ဖြာစီးဆင်းကြညသည့် မြစ်ငယ်ငါးရာတို့သည် ဂဂါင်္၊ ယမုနာ၊ အစိရဝတီ၊သရဗူ၊ မဟီ ဆိုသည့် မြစ်ကြီးငါးသွယ်တို့ အသီးသီ စီးဝင်ကြလျက် ဘင်္ဂလားပင်လယ်တွင် ပေါင်းဆုံကာ မဟာသမုဒ္ဒရာ အတွင်းသို့ စီးဝင်ကြပေသည်။ ထိုနည်းတူမြန်မာနိုင်ငံတွင်လည်း မေခ၊မလိခ၊ချင်းတွင်း (သလ္လာဝတီ)၊ ဒုဌဝတီ၊ ပေါင်းလောင်းစသည့် မြစ်ငယ်များစုပေါင်းစီးဆင်းကြရာမှ ဧရာဝတီမြစ်၊ စစ်တောင်းမြစ်၊ သံလွင်မြစ် ဟူ၍ဖြစ်ပေါ်လာပြီး မုတ္တမ ပင်လယ်အတွင်း စီးဝင်ကြပေသည်၊ ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံ တော်အတွင်းမှီတင်းနေထိုင်ကြကုန်သောလူမျိုးအသီးသီး၊ ဘာသာဝင်အသီးသီးတို့သည်လည်း မိမိတိုှု မွေးဖွားရာဒေသ ရေကြည်ရာ မြက် နုရာပြောင်းရွှေ့နေထိုင်ရောဒေသ မိရိုးဖလာယဉ်ကျေးမှု ဓလေ့ထုံးစံ အဖုံဖုံ မတူကွဲပြားနေရာမှ တိုင်းဒေသကြီါ် ပြည်နယ် ၁၄ ခ၊ ဘာသာကြီး ၄ ဘာသာစစည်းမှု စုံညီသောအခါ ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်ဟူ၍တစ်ခုတည်းသော အမိနိုင်ငံတော်ကြီး ဖြစ်ခဲ့ရပေသည်။
မတော်တဆ ဖြစ်ပေါ်လာသောပဋိပက္ခအမှုကို တန်ပြန်လက်စားချေလိုသည့် သဘောဖြင့် မဖြေရှင်းပဲ အကြောင်းအကျိုး အဆိုးအကောင်း ပညာဉာဏ်ဖြင့် ဝေဖန်ကာ မေတ္တာဖြင့် ဖြေရှင်းသွားမည်ဆိုပါက အားလုံး ငြိမ်းချမ်းပြေလည်ပြီး သုခချမ်းသာတရားများ ရရှိကြမည်ဖြစ်ပါသည်။
ဗုဒ္ဓဘုရားရှင်သည်ငြိမ်းချမ်းရေးပန်းတိုင်ကို လမ်းညွှန်တော်မူခဲ့ပါသည်။ သာဓကတစ်ရပ်မှာ ကပိလဝတ်ပြည်သားများနှင့် ကောလိယပြည်သား တို့သည် လယ်ရေသွင်းမည့် ရောဟိဏိမြစ်ရေကို အကြောင်းပြုပြီး ခိုင်ရန်ဖြစ်ကြပေးရာ တစ်ဦးတစ်ယောက်စီမှ စတင်ဖြစ်ပေါ်ခဲ့သော ခိုက်ရန် ဖြစ်ပွားမှုသည်တဖြည်းဖြည်း လူအုပ်စုများများလာပီး အုပ်ချုပ်သူများမှတစ်ဆင့် နှစ်ပြည်ထောင်မင်းများအထိ သတင်းပေါက်ကြားသွားခဲ့ကာ ကပိလဝတ်ပြည်နှင့်ကောလိယပြည်နှစ်ပြည်ထောင်မင်းများစစ်ဆင်ဖို့အထိ အခြေအနေ တင်းမာလာခဲ့ပေသည်။ထိုအချိန်တွက် ဗုဒ္ဓဘုရား ရှင် ကြွရောက်တော်မူလာပြီးလျှင် တန်ဖိုးအနည်းငယ်သာရှိသည့် ရေကိုအကြောင်းပြုပြီးတန်းဖိုးအနဂ္ဃထိုက်တန်သောလူသားများ၏အသက်ကို မ ဖျက်စီး မသတ်ဖြတ်ထိုက်ကောင်း၊ ခိုက်ရန်ဖြစ်ပွားခြင်းကြောင့် အကျိုးထူးတစ်စုံတစ်ရာ မရှိနိုင်ကြောင်းများကို ဇာတ်တော်များနှင့် သာဓကဆောင်၍ဟောကြားဆုံးမတော်မူခဲ့ပေသည်။
ငါးရာ့ငါးဆယ်ဇာတ်ဝထ္ထုလာ ဖန္ဒနဇာတ်တော်တွင် ဝက်ဝံတစ်ကောင်သည် ကြို့ပင်ကြီးတစ်ပင်အောက်၌အိပ်ပျော်နေစဉ် ကြို့ကိုင်းခြောက် ကျိုးကျပြီး ဝက်ဝံ၏ နောက်ကျောကုန်းကိုထိမှန်ခဲ့ရာဝက်ဝံက ကြို့ပင်စောင့်နတ်၏လက်ချက်ဟုထင်မှတ်လျက် ရန်ငြိုးထားခဲ့သည်။ ဝက်ဝံသည် ကြို့ပင်စောင့်နတ်အပေါ်ထားရှိသည့် ရန်ငြိုးဖြင့် ရထားလုပ်မည့်လက်သမားများနှင့်တွေ့ဆုံခိုက် ရထားလုပ်ရန်သစ်သားအတွက် ကြို့ပင်သားသည် အခိုင်ခံ့ဆုံး၊ အကောင်းဆုံးဖြစ်ကြောင်းအကြံပြုပြောဆိုကာထွက်ခွာသွားခဲ့ပေသည်။ ကြို့ပင်စောင့်နတ်ကလည်း တစ်ဖန် ပြန်၍ဝက်ဝံအကျိုးယုတ်စေရန် ရထားလုပ်ရာတွင် ရထားအကွပ်ကို သံပြားအစား ဝက်ဝံရေဖြင့် ရစ်ပတ်လျှင် ပိုမိုခိုင်ခံ့ကြောင်း၊ လက်သမား များ အား အကြံပြုပြောဆိုပြန်ပါသည် လက်သမားများကလည်း ဝက်ဝံကိုသတ်ပီး ကြို့ပင်ကို ခုတ်လှဲကာ ရထားပြုလုပ်ခဲ့သဖြင့် ဝက်ဝံနှင့် ကြို့ပင်စောင့်နတ် တို့သည် ရန်ငြိုးထားကြခြင်းကြောင့် ဝက်ဝံလည်းသေကျေရပီး ကြို့ပင်သည်လည်း ခုတ်လှဲခံရ၍ကြို့ပင်စောင့်နတ် ဘုံပျောက်ခဲ့ရပေသည်။
တစ်ဖန် ဗုဒ္ဓဘုရားရှင်ကအားကြီးတိုင်းလည်း အားနည်းသူကို အနိုင်မယူသင့်ပုံကို လဋုကိကဇာတ်တော်ကို သာဓကဆောင်၍ဟောကြား ဆုံးမတော်မူခဲ့ပေသည်။ လဋိုက ဇာတ်တော်မှာ အားကြီးသော ဆင်ရိုင်းကြီး တစ်ကောင်သည် တောင်းပန်နေသည့်ကြားမှ မညှာမတာ ရက်စက်စွာဖြင့် နှံစုတ်ငှက်ငယ်မလေး၏သားငယ်လေးများကို ခြေတောက်ဖြင့် နင်းခြေသတ်ဖြတ်ပြီး ကျင်ငယ်ရေဖြင့်မျောပါသွားအောင် ရက်စက်ခဲ့ပေသည်။ နှံစုတ်ငှက်ငယ်မလေးသည် ကျီး ၊ ယင်မမဲရိုင်း၊ ဖားတို့နှင့် မိတ်ဆွေဖွဲ့ အကူအညီတောင်းခံပြီး လက်စားချေရန် စီစဉ် ခဲ့ပါသည် ။ကနဦးဆုံးကျီးငှက်က ဆင်ရိုင်းကြီး၏မျက်လုံးအစုံကို နှုတ်သီးဖြင့် ရုတ်တရက် ထိုးဖောက်ပြစ်လိုက်ပါသည်။ ထို့နောက် ယင်မမဲရိုင်းက ဆင်ရ်ိုင်းကြီး၏ဒဏ်ရာရထားသည့် မျက်လုံးများထဲသို့ပိုလောက်လန်းများထည့်ပေးလိုက်ပေသည်။
ဆင်ကန်းကြီးဘဝရောက်သွားရသည်.ဆင်ရိုင်းကြီးသည် ရေငတ်လာသဖြင့် စမ်းတဝါးဝါးဖြင့် ရေရှာထွက်လာခဲ့ရာ ဖားက တောင်ထိပ်ပေါ်မှ အသံပြုလိုက်ပါသည်။ ဆင်ကန်းကြီးသည် ဖားသံကြားရာသို့ ရေရှိသည်အထင်ဖြင့် တောင်ထိပ်ပေါ်သို့ တတ်လာသည့်အချန်တွင် ဖားက တောင်ကမ်းပါးဘက်သို့ဆင်းပြီး ကမ်းပါးပြတ် ရှိသည့်ဘက်မှ အသံထပ်ပေးလိုက်ပေသည်။ ဆင်ကန်းကြီးသည် ဖားသံရှိရာသို့ စမ်းတဝါးဝါး ဖြင့်ဆက်လျှောက်သွားရာ ကမ်းပါးပြတ်မှ လျှောကျ၍မရှုမလှ သေဆုံးသွားရပေသည်။
အားကြီးသည်ကို မာန်တတ်ပြီး အနိုင်ယူခဲ့သည့်ဆင်ရိုင်းကြီးသည် အင်အားသေးငယ်သည့် နှံစုတ်ငှက်ငယ်မလေး၏အစီအမံကြောင့် သေကျေပျက်စီးရသည့် သာဓကဖြစ်ပေသည်။
ဗုဒ္ဓဘုရားရှင်၏ဒေသနာတော်များကိုကောက်ချက်ချကြည့်လျှင် တန်ဖိုနည်းပါးသော ရေကြောင့် ပဋိပက္ခပြဿနာများဖြစ်ပွားရပုံ၊ ရန်ငြိုးထားခဲ့ သည့်အတွက် ဝက်ဝံသေဆုံးပြီး ကြို့ပင်စောင့်နတ်၏သစ်ပင်ဘုံဗိမာန်ပျက်စီးရပုံ၊ အားကြီးသည်ကို အကြောင်းပြုကာ အနိုင်ကျင့်ခဲ့သဖြင့် ဆင်ရိုင်းကြီး သေကျေပျက်စီးရပုံတို့ကို နမူနာယူသင့်ထိုက်ပေသည်။
မြန်မာနိုင်ငံ၏ ရေမြေတွင် မွေးဖွားပြီး မြန်မာနိုင်ငံ၏ ရေမြေတွင်ကြီးပွားကာ မြန်မာနိုင်ငံ၏မြေမှာပင် ဘဝနိဂုံးအဆုံးသတ်ကြမည့် ပြည်သူပြည် သားဘာသာဝင် ရဟန်ရှင်လူအများတို့သည် မိမိတို့၏ စိတ်နှလုံးတွင် လောင်မြိုက်နေကြသည့် လောဘမီး၊ ဒေါသမီး၊ မောဟမီးတို့ကို ဗုဒ္ဓဘုရားရှင်ဟောကြားတော်မူသည့် ငြိမ်းချမ်းရေး အသိတရားမေတ္တာရေစင်ဖြင့် အတူတကွ သွန်းလောင်းကြလျက်တစ်ဦးကတစ်ဦးအပေါ် မေတ္တာ ကရုဏာ မုဒိတာ ဥပေက္ခာ ဗြဟ္မစိုရ်တရားများပွားများနိုင်ကြပါစေကြောင်း ဆန္ဒလောင်းလျက် သာရဏီယဩဝါဒတရားချိီးမြှင့် လိုက်ပါသတည်း။
ဒီနေ့ ကြေးမုံသတင်းစာမှာ အချပ်ပိုအနေနဲ့ ပါလာတဲ့ ….
ဗန်းမော်ဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့ ဩဝါဒလေးကို တင်ပေးလိုက်ခြင်းဖြစ်ပါသည် ..
ဒီကနေ့.. ထူးခြားတဲ့ နေ့ ဖြစ်တဲ့ အတွက် ပွဲဆူ ခဲ့လျှင် တရား စကားနဲ့ တည်ငြိမ်အောင် တရားဩဝါဒ ချီးမြှင့်ထားတာပါ။
ဘာမှ မဖြစ်ပဲ တည်ငြိမ်အေးချမ်းခြင်းသည် အလွန်ကောင်းလှပါသည်။
mayjuly ရေ . မပျင်းမရိနဲ့ ပြန်ရိုက်ပြီးတင်ပေးတာ ကျေးဇူးပါ ။
ဆရာတော်ကြီး ဩဝါဒ လိုက်နာသင့်ပါတယ်….
အလို မေဂျူလိုင် လေး ရဲ ့နစ်နိမ်းက ရှူရှူးမ တဲ့လား ။
မေဂျူလိုင်လေးရေ သာဓု သာဓု သာဓု ပါ ကွယ် ။
အဲ နာမည် အရင်းတွေ ပေါ်ကုန်ပီ….
ပေါက်စိန်ဗိုက် က ချကားမပီလို့ပါချင့် ..
မဟန ဘာလုပ်နေလဲဆိုတဲ့ သဂျီး နိုးရင် ဖတ်မိပါစေ။